Sharciyada cusub ee Sweden ka dhaqan galay maanta | Somaliska
Sharciyada cusub ee Sweden ka dhaqan galay maanta
Sidii caadada ahayd, maanta oo bishu tahay July 1 waxaa dhaqan-galay sharciyo cusub oo uu ansixiyay baarlamaanka Sweden. Inkastoo sharciyada cusub ee bishaan dhaqan galay ay aad u yaryihiin. Sharciyada cusub ayaa waxaa ka mid ah.
In lacag la’aan laga dhigay baaritaanka cudurka kansarka naasaha gala. Sharcigaan ayaa ka dhaqan galaya guud ahaan wadanka.
Waxaa sidoo kale la adkeeyay sharciga tuukada aqoonsiga, qofkii lagu qabto in uu isticmaalay aqoonsi qof kale leeyahay ayaa lagu xukumi doonaa ilaa xabsi gaaraya 2 sano.
Sidoo aan dhowr jeer soo qornay, 20-ka bisha July waxaa dhaqan gali doona sharciga sida weyn lo cambaareeyay ee qaxootiga, kaasoo qaasatan joojinaya bixinta sharciga rasmiga ah, isla markaana aad u adkeynaya mideynta qoysaska.
1-da bisha ogoosto waxaa dhaqan galaya sharci kale, oo ku saabsan in qofkii ka guuraya gurigiisa uu heli doono canshuur celis qarashka ku baxaya geediga.
Ragga oo hawsha guriga qabta iyo dumarka oo iska baashaala!
Rajo wayne says:
July 2, 2016 at 03:34
Asc asxabeey qofki wax nagu dhama ma la joojiyay arintii gurka cusub oo aheed labo sano hadii qofku ilmo haysto
waa idin nacnay ee baga taga ayaa nala dhahooyaa ee wadankeena aan u tashano
Asc Rajo waxaan filaa in lajoojiyay arinta 2 sano waayo aniga ayaa leegu heestay arinta 2 sano hadase waxaay idhaheen hasoo cadeeyo inuu soomaali yahay tack!
Salmo abyo tack lkn ani hada aan cudbahay waxiii dhamaa way u dhamadeen lkn ani ayaa suga in la iga qado dhacanka inslah dhawan lkn waxan ka baqaaa arintii labada sano marka amaa maqashay qof guur cusuba oo horay laga siiyay ayantan ayadoon lagu xujeynin
July 3, 2016 at 08:05
2 sano iyo shan sano meel iska dhiga 20 ka bisha ka hor qofki jawaab positive helo waa ok qofki kale ha iska ilaabo damacaas cidaan albaabkooda wey xirteen.
Sahra shìiqey says:
July 4, 2016 at 02:01
Waan idin salaamay saaxiibayaal sale an kadib webkaan waan soo gain as waan hadalnaa haba uku badnatee dalka 2 San ka hadla Waxaan ufahmay qof kasta mesha Laka heesto uu kahadlaa waxba soma kordhineso mana ahan webkaan in aan eedno ee calaacalka badan aan joojino ee side an wax uqabsan laheen aan raadino Ilene qof walbo meel ayuu ka Oman yhy ee hala Keene fikred aan wax ku raadsano inta laka Maqan yahy oo 2sana ah iyo inta sharcika Heesan